Home Wararka Hanti Dhowrka Qaranka oo lagu qabtay been u ku sheegay qoraalkii uu...
Hanti Dhowrka Qaranka oo lagu qabtay been u ku sheegay qoraalkii uu u diray Gudoomiyaha Baarlamaanka (Cadeyn)
Labo maalin ka hor ayeey ahayd markii Hanti Dhowrka Qaranka Maxamed Afgooye uu u diray qoraal Gudoomiyaha Baarlamaanka kaas oo ku sheegay in ayan jirin wax wada tashi ah oo kala dhexeeyay Gudiga Maaliyadda ee Baarlamaanka isla markaana uusan jirin xiriir toos ah oo wada tashi ah.
Hanti Dhowrk Qaranka ayaa ah shaqsi uu keensaday RW Kheyre qeybna ka ah musuqa lagu dhacayo hantida Qaranka. Sida MOL horay idinkuugu soo gudbisay qoraalkii uu shalay soo saaray Hanti Dhowrka Qaranka aya waxa lagu soo diyaariyay laguna soo qoray Xafiiska Ra’iisal Wasaare Kheyre.
Waxaa jira macluumad dheeri ah iyo caddeeymo ay heshay MOL, xogaha aan helnay ayaa waxaa ka mid ah sida loo dhacay lacagta maqan iyo cidda ay ku maqan tahay. Caddeeymaha ay heshay MOL aya isugu jira jeegag ay qoreen madaxda ugu sarreeysa dowladda kuwaaso loo qoray shaqsiyaad ay isku hayb yihiin madaxda dalka.
Waxaan qoraalada danbe idiinkugu soo bandhigi doonaa caddeeymahaas oo buuxa.
Halkan kalabax warbixinta hantidhowrka
[su_slider source=”media: 333864,333863,333862,333861,333860,333859,333858,333857,333856,333855″ target=”blank” width=”660″ height=”880″]
Previous articleEritreans praying for divine intervention to end tyrannical rule
Next articleWarmurtiyeed laga soo saaray kulankii Farmaajo iyo Musafeni (Akhriso)
Soomaali lagu la’yahay gudaha Dalka Mareykanka
Maxaa sababay qarixii wayna ee ka dhacay caasimada lubnaan